BBC Somali - Warar - Afar askari oo lagu dilay Marka
Afar askari oo lagu dilay Marka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Oktoobar, 2012, 14:31 GMT 17:31 SGA
Ugu yaraan afar askari oo uu ku jiray taliye sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Somaaliya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay duleedka Marka. Tiro intaa ka badan ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay duleedka magaalada Marka. dagaalyahano ka tirsan Alshabaab ayaa wadada u galay gaadiid dagaal oo ay wateen ciidamada dowladda.
Taliyaha guutada shanaad ee ciidanka Soomaliya General maxamed Ibraahin Faarax Goordan iyo saddex askari ayaa ku dhintay weerarka, oo ay Alshabaab ay jidka ugu galeen ciidamada dowladda duleedka magaalada Marka.
Weerarka ayaa la isticmaalay baasuukayaal iyo rasaas ay adeegsanayeen Alshabaab, dowladana waxay ku jawaabtay hub culus.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa u sheegay BBC in ay dileen dhowr Alshabaab, qaar kalena dhaawaceen.